Zvepamutemo Ubuntu 16.04 LTS ichave neinotanga pasi | Linux Vakapindwa muropa
Zvepamutemo Ubuntu 16.04 LTS ichave neinotanga pasi
Aya ndiwo maratidziro matsva eUbuntu 16.04 LTS kune avo vanoda kushandisa Launcher pazasi, sarudzo inodzoserwa zvachose
Imwe nguva yapfuura, runyerekupe rwakasimba rwakange rwamuka kuti iyo yekutanga Ubuntu launcher, iyo kazhinji inowanikwa kuruboshwe, iwe unogona kuenda kuzasi, yakafanana neWindows. Zvakanaka, nezuro zvakaziviswa zviri pamutemo kuti sarudzo iyi ichaonekwa muUbuntu 16.04 LTS kekutanga munhoroondo.
Iyi sarudzo inobvumidza chimwe chinhu icho vazhinji vashandisi vanga vakamirira, sezvo mazhinji e vanhu vanobva kuWindows vakajaira kuve nemununura pazasi pechiso. Vamwe venyu vachanyunyuta, nekuti muchikamu hunhu hweUbuntu uye chimwe chezviratidzo zvikuru chakarasika.
Kupfuura zvese, iyi sarudzo inodzoserwa zvizere, kukwanisa kudzokera kuruboshwe divi rekutanga pazvinenge zvichidiwa. Izvi zvatove zvakaratidzwa muBeta vhezheni dzeUbuntu 16.04 LTS, umo, kuburikidza nemirairo, iyo Unity Launcher inogona kumiswazve.
Pari zvino chinzvimbo chepasi chete uye chinzvimbo chekuruboshwe chinowanikwa. Hazvizivikanwe kana mune yekupedzisira vhezheni yakawanda sarudzo nzvimbo senge kurudyi kana kumusoro kuchaiswa, chimwe chinhu chinotenderwa seWindows 7.
Uyewo Ini handizive kana chinzvimbo chinogona kuchinjwa pasina kushandisa mirairondiko kuti, pamwe nekugadziriswa kwekuona. Sezvineiwo, hongu, sezvo paine vanhu vazhinji vasina kukwana kuraira kwetambo yekuraira uye graphical interface inogara iri nyore.
Ini zvakare ndinotora iyi noti kukuyeuchidza kuti yekupedzisira vhezheni yeUbuntu 16.04 LTS ichave iri kunze kweinopfuura mwedzi, kunyanya musi waApril 21, 2016, zuva rinonyatso kuve rekupedzisira kunze kwekumanikidza kwemajeure.
Uye iwe ... Unofungei nezve sarudzo iyi? Iwe unofunga kuti iri kumberi pachikamu cheCanonical here kana, zvakadaro, zvinopesana nekutanga kweUbuntu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zvepamutemo Ubuntu 16.04 LTS ichave neinotanga pasi
Iyi sarudzo yekuisa bhawa kwaunoda ingadai yaigoneka kubvira vhezheni 1.0. Ivo vaida kumanikidza mafomu avo uye kuti muLinux nyika haishande, inogadzira kurambwa, kusavimbika ... senge idzo dzakatambura Ubuntu makore ano. Ndinoombera sarudzo, zvirinani kunonoka kupfuura kusati kwamboitika. Ino yave nguva yekufambisa kumwe kumisikidza pasina kudikanwa kwepasas, tweaks, extenssions uye imwe bullshit. Uye nezveGnome ini ndinofunga zvakafanana. To! Ndakanga ndatova comfortable
"Ino ndiyo nguva yekugadzirisa kumwe kusarongeka pasina kudikanwa kwemapas" aunogunun'una pamusoro pePPAs ayo akanakisa ubuntu anondiita ndinoseka.
Ichokwadi izvo zvaunotaura asi zvakare funga kuti dai zvese zvaive zvakachinjika mukugadzirisa kwerusununguko rukuru rwemushandisi, mhedzisiro yacho ndeyekuti kupihwa kwese kwaizove kwakafanana. vangadai vasina zivo. Fungidzira, Ubuntu ingadai iine zita chete!
Izvo zvinofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti seri kwesarudzo kune timu yevanamati vakazvipira kuyedza zvese uye vanotora aesthetics kufunga
Mutumwa Jose Valdecantos Garcia akadaro
Zvinoratidzika sezvakarurama. Chero shanduko inomiririra kuvandudzwa mune izvo zvemunhu zvinogamuchirwa.
Pindura Mutumwa José Valdecantos García
Ngatione kana ichibuda sezvo ini ndoda kuiisa XD
Edgardo Vasikana akadaro
Kana ivo vachishandisa zviri pachena iyo Windows 7 graphical interface kuti iite iyo OS kutevedzera, kuisa yekutanga bar uko hupenyu hwese hwaunzwa neWindows OS haifanire kushamisika chero munhu
Pindura Edgardo Chicas
Wakamboshandisa Ubuntu here?
Pindura kuna amirtorrez
Unogona kuifarira kana kuti kwete, asi pane yakafara moniteta iyo launcher padivi inonzwisisika nekuda kwenzvimbo yekuchengetedza nzvimbo.
Hei asi hachisi chinhu chimwe chete ichi chiri kuitika neCinnamon neMATE idzo dzine bhawa pazasi nebhatani remenyu? Zviripachena izvi zvinokutendera iwe kugadzirisa chinzvimbo kwaunoda, asi zvirinani muLinux Mint yangu ivo vari default pasi pazasi.
Ubuntu kubva pakuipa kusvika pakuipa, tenda kunaka isu tine mint linux neMate.
Pindura kuna Franciscoxp
Cesar Martin Lopez akadaro
Chinhu chega chandinoda ndechekuti iwe unogona kusarudza misoro
Pindura kuna César Martín López
Ndine Linux Mint ine MATE uye bhari iri pasi uye bhatani reMenu riri kuruboshwe-pasi.
Hapana ruzivo pane linux mint 18? Uye shanduko dzayo hombe?
Mhoro John. Izvo hazvigoneke kuve neruzivo paLinux Mint 18 nekuti ichave yakavakirwa pane yekupedzisira vhezheni yeUbuntu (Iyo imwe yatiri kutaura nezvayo panguva ino) Fungidzira kana parizvino Ubuntu iri mubeta, timu yeMint haina kana kutanga yaro Pre vhezheni. -alpha.
Kubva pane zvandakaverenga ndezvekuti ivo vanozove neshanduko muchikamu chemifananidzo, cheiyo interface yandinoenda.
Iyo Ubuntu launcher haisi chimwe chinhu kunze kwekusiyana kweiyo OSX Launcher uye kwete windows taskbar. Naizvozvo, kana ichifanirwa kuita senge OS, ichave iri OSX, iyo yandinofungawo kuti ine yepamusoro bar / pani, handiti?
Pindura kuna Nymar
Aiwa, iyo desktop yeUbuntu yakavakirwa paGnome, sezvo iyo yekutanga ichichinjisa kubata zvikwiriso vakazviita nenzira iyoyo, zvisinei iyo yepamusoro bharari ichiri Gnome, inoteedzera OSX ndeye Bugsmentary (Elementary OS).
Kuti uwane zvimwe, edza mate kana gnome2.
Iyi sarudzo yekumisikidza inoita senge yakanaka kwandiri. Zvinotombove zvakanaka kwazvo kana zvikashandurwa kutaridziro yechiratidziro ... Rega nditsanangure: pane panoramic skrini nzvimbo yakatwasuka ishoma uye iri nani kushandiswa nebhawa kune rimwe divi, handina mubvunzo nezve izvi , asi pamasikirini akaenzana kana patinotenderedza panoramic skrini yakatwasuka, bhawa iri nani pazasi; Izvo zvakati, kana Ubuntu ikazviona izvi, kureva kuti, kana iyo skrini iine mraba kana kana iri panera yakatarisa kumusoro, uye ndokungoisa yega launcher pazasi ndokuisiya kuruboshwe mune yakatarisa panorama yakatarisa, unenge uri mukaka ... Zvese izvi, chokwadika, pasina kufungira chokwadi chekuti chero munhu anoda anogona kuisa nemaoko bara kwavanoona zvakakodzera.
Uye chinhu chimwe chinondinetsa kunyanya, uye icho chingave chinogadzirisika, iko kushanda kwekuburitsa mhedzisiro.
Kana isu tavhura mhedzisiro (nekiyi Super kiyi kana nekona inoshanda) zvinoitika zvinoshandura marongero ezvigunwe zvewindow ine imwe nzira yandisina kumbobvira ndanzwisisa.Kushanda, mumaonero angu, zvinonyanya kubatsira kana izvi zvinogona kuitwa kumisikidza kuitira kuti zvigunwe zvirairwe nekukasira nenzira yaanovhurwa uye kuti vagone kufambiswa nekuvazvuzvurudza kana mushandisi achizvida.
Iyi ndiyo imwe sarudzo yandinosuwa, ini ndinoona mhedzisiro ichibatsira padanho rekugadzira, asi chete kana ndikaziva kuti fafitera rinenge riripo pandinoritsvaga, kana uchifanira kuritsvaga mune imwe nzvimbo nguva imwe neimwe yaunoshandisa mhedzisiro, iwe unorasikirwa nenguva uye inova isinganzwisisike.
MuGnome Shell, semuenzaniso, ndisati ndagadzirisa nekuwedzera (mushanduro dzazvino handizive kuti izvi zviri kufamba sei, nekuti ini ndabviswa padhesiki uye, chenjera, ndinoda Gnome Shell), asi muUbuntu ini handina kumboziva maitirwo azvo, Chokwadi pane sarudzo mu compizconfig-marongero-maneja, asi iwe unofanirwa kushinga zvakakwana kuyedza neCompiz.
Izvo zvakati, ichi ndechimwe chezvinhu izvo zvinogona kunge zvinogadzirisika muUbatana.
Ubuntu pakupedzisira uone mwenje ...
Ooh..q yakanyanya kuchinja shanduko yehunhu ...
Pindura kuna Astoroth
Mhoroi, Ndiri Kupindura Kune Iwo Makomendi Uye…
1- Linux Inogadziriswa, Yemahara, Yakavhurika, Nezvimwewo.
-Izvi zvinorevei? Kuti iwe ugone kuita chero chaunoda, iwe unofanirwa kuve necomputer hunyanzvi zvakare.
Usanyunyute nezve Chinhu Chakareruka Senge Ichi, Unogona Kuigadzirisa.
2- Iwe haudi sei Ubuntu iri?
-Ipapo Chinja Kune Imwe Distro, Haudi Iwe? Ipapo Gadzirisa Linux Yako Kuti Unzwe, Zvakaoma Here? Dzidza, Husimbe? Usarega.
3- Linux Zviri Pamutemo Yakagadzirirwa Komputa, Saka Zvinoreva Kana Iwe Uine Ruzivo rwakasiyana rweComputer Uye Linux, Unogona Kuita Izvo Zvaunoda NeYako Distro!
Zvakaoma Sei Kudzidza Uye Kuzviita?
ONA: Ini ndinotaura kune zvakataurwa.
Pindura kune eeuu01
Luis Alberto Parra akadaro
… Zvakajeka kwazvo, kwaziso…. !!!
Pindura Luis Alberto Parra
imwe yakapfuura apa akadaro
Zvakaoma kwazvo kudzidza kunyora? Usati wapa zvidzidzo kana kuraira kune chero munhu nezve chero chinhu, dzidza yako.
Pindura kune chimwe chakaitika
Mguel pls akadaro
mira kwenguva yakareba chete kuti ndikwanise kuendesa iyo **** bar kumativi ._.
Pindura kuna Mguel pls
Ndinovimba ine iwo akati wandei madingindira (ini ndinofarira iwo mashoma akajeka iwo) nekuti chokwadi, zvese orenji nepepuru zvatogumbura!